आइपीएल अक्सनको लागि नेपालबाट सन्दीपको नाम मात्र पर्यो, कति छ न्यूनतम मूल्य? - The Nepali Video
आइपीएल अक्सनको लागि नेपालबाट सन्दीपको नाम मात्र पर्यो, कति छ न्यूनतम मूल्य?
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२१ को अक्सनमा नेपालबाट लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने मात्र छनोट भएका छन् ।
सन्दीपसहित ८ खेलाडीले नेपालबाट अक्सनका लागि नाम दर्ता गराए पनि १४औं संस्करणको आइपीएलका लागि हुने अक्सन लिस्टमा सन्दीपको नाम मात्र परेको बिसिसिआईले जनाएको छ । नेपालबाट सन्दीपसहित दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, शरद भेषावकर र अभिनास बोहराले नाम दर्ता गराएका थिए । तर अरूले अवसर पाएनन् ।
बीसीसीआईले आइपीएल अक्सनमा सहभागी हुने खेलाडी र न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सन्दीपले आफ्नो मूल्य ४० लाख भारू राखेका छन् । कूल १ हजार ९७ खेलाडीले नाम दर्ता गराए पनि सहभागि फ्रेन्चाइजले आफ्नो सूची बनाएपछि अक्सनमा २९२ खेलाडी मात्र समावेश हुने भएका छन् । भारतका १६४ र ओभरसिज १२५ खेलाडी अक्सनमा सहभागी हुनेछन् ।
एसोसिएटबाट नेपालका सन्दीपसहित ३ खेलाडी छन् । जसमा अमेरिकाका अली खान र युएईका कार्तिक मेइयाप्पन लिस्टमा अटाएका छन् । अक्सनमा किंग्स एलेभेन पञ्जावले सर्वाधिक ५३.२ करोड भारु खर्च गर्न पाउनेछ । पञ्जावले ९ जना सम्म खेलाडी राख्न सक्नेछ । यस्तै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले सर्वाधिक १३ खेलाडी राख्न पाउनेछ र उसको ३५.९ करोड ब्यालेन्स बाँकी छ ।
सनराइजर्स हैदरावादले सबैभन्दा कम ३ खेलाडी मात्र अक्सनबाट लिन सक्नेछ र त्यसमा एक विदेशी खेलाडी लिन पर्नेछ । हैदरावादको १०.७५ करोड बाँकी छ । यस्तै चेन्नई सुपर किङ्सको १९.९ करोड रकम बाँकी हुँदा ६ जना खेलाडी लिन सक्नेछ । जसमा ओभरसिज प्लेयरको स्थान १ छ । १५.३५ करोड भारू खर्च गर्न पाउने मुम्बई इन्डियन्सले ७ जनासम्म खेलाडी राख्न सक्नेछ ।